Wasiir Hadliye oo ka mid noqday madaxdii Afrikaanka ah ee la siiyay baasaboorka ay ku mideysan tahay Afrika – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir Hadliye oo ka mid noqday madaxdii Afrikaanka ah ee la siiyay baasaboorka ay ku mideysan tahay Afrika
Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/salaan Hadliye Cumar oo ka qeyb galay shir madaxeedkii 27-aad Midowga Afrika ee lagu soo gaba-gabeeyay magaalada Kigali ee dalka Ruwanda ayaa ka mid noqday madaxdii Afrikaanka ee la siiyay baasaboorka cusub ee ay ku mideysan tahay qaaradda Afrika.
Wasiir Hadliye oo wareysi siiyay idaacadda BBC-da laanteeda afka Soomaaliga ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay baasaboorka Afrika ee la siiyay, weligiisna uu ahaa ilaa xilligii jaamacada uu ku jiray nin u ololeeya jiray Afrikada weyn.
Wuxu wasiir Hadliye sidoo kale sheegay in Soomaalida ay faa’ido wayn ugu jirto baasaboorka Afrika yeelatay, islamarkaana ay u fududaan doonto safarada ay ku tagayaan dalalka Afrika kale.
Dhinaca kale, wasiirka ayaa ugu dambeyn sheegay shirka madaxda Afrika ee ka dhacay magaalada Kigali ee dalka Rwanda, lagu aqoonsaday in Soomaaliya ay ka baxeeyso dhibaatadii ay ku jirtay muddada dheer islamarkaana hadda qaaradda ay u soo jeesatay sidii ay u gacan siin lahaayeen.
“Shirka Kigali ka dhacay waxaa lagu aqoonsaday in Soomaaliya ay ka baxeyso dhibaatadii islamarkaana ay ka adkaaneyso argagixisadii dalka u diiday inuu horey u socdo” Sidaasi waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/salaan Hadliye Cumar.